Vagari vekumaruwa ekwaNhema, Shurugwi vanoti kushomeka kwemari munyika kuri kuvapinza mumatambudziko sezvo vave kutadza kufambisa mabasa anoda mari.
Vamwe vevagari vekwaNhema vanoti kushaikwa kwemari munyika kwakanyanyoomera vagari vekumaruwa avo vasina mabhanga uye vasina kunoshandisika makadhi ekumabhanga.
Pakashanyirwa nzvimbo yekwaNhema kuShurugwi neStudio 7 yakaona kushushikana kuri kuita vagari nekuda kwekushaikwa kwemari. Mumwe mugari wemunharaunda iyi, muzvare Patricia Furusa vakaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti kumamisha hakuna kwavanokwanisa kushandisa makadhi ekumabhanga vakaomerwa nehupenyu zvikuru sezvo zvese zvichida kubudisa mari uri musvo.
Mumwe mugari wekwaNhema, Amai Laiza Chivi vaudza Studio 7 kuti vari kusanganawo nedambudziko rekutora mari inenge yatumirwa neEcocash. Amai Chivi vari kuti vari kumanikidzwa kuti vatange vatenga zvinhu muzvitoro zvekumamusha izvo zvinobudisa mari yeEcocash
Izvi zvatsigirwa naAmai Susan Makandire avo vati vari kumanikidzwa kutenga zvavanenge vainazvo zviri kuvashungurudza zvikuru.
Mumwezve mugari, VaZivanai Chirara vati dzimwe nguva vari kutotenga zvinhu nezvirimwa zvavanenge vanazvo sezvo vari kushaya mari.
Ecocash inoti hazvisi pamutemo kuti vanhu vamanikidzwe kutenga zvinhu kuti vawane mari kubva kuEcocash kana kubhadhara mutero kuti vawane mari. Vagari vekwaNhema vanoti dai hurumende yagadzirisa dambudziko rekushaikwa kwemari kuti hupenyu hwavo huvarerukire.
Gavhuna weRBZ Dr John Mangudya vakazivisa mukutanga kwemwedzi uno kuti vainge vachizowedzera mari yemabond notes nemamwe mamiriyoni mazana matatu emadhora pamari inosvika mamiriyoni zviuru mazana maviri zvemadhora zvemabond notes zvagara zviri po.
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzekune dzimwe nyika muna 2009 apo dhora remunyika rainge rashaya simba zvisati zvamboonekwa munhoroondo yenyika.